Soo -saarayaasha Alaabta | Alaab -qeybiyeyaasha Shiinaha & Warshadda
PCBA Circuit analyzer thermal
camira imaging kuleylka infrared ee jirka aadanaha
module imaging kulaylka infrared
Baaxadda sawirka kaamerada infrared
kamarad kale oo kuleylka kuleylka ah
DYT Clip-on Heerkulka ...
nooca-256 c kulayl infrared ...
CA10 PCB guddiga Circuit ther ...
DP-32 Sawirka kuleylka ee infrared ...
DR-23 imag thermal infrared ...
CA10 PCB Circuit analyzer thermal thermal
Falanqeeyaha kuleylka ee PCB CA-10 waa qalab gaar ah oo loo isticmaalo ogaanshaha goobta kuleylka ee guddiga wareegga , sidaa darteed inta lagu gudajiro naqshadeynta iyo horumarinta, naqshadeynta kuleylka ee guddiga wareegga ayaa aad muhiim u ah, falanqeeyaha kuleylka ee heer naqshadeynta ayaa bixin kara tijaabinta kuleylka kuleylka ee tiro badan oo datas ah, waa aalad lama huraan u ah naqshadeynta qalabka; Iyada oo la adeegsanayo falanqeeyaha kuleylka, waxay si dhakhso leh u heli kartaa daadinta iyo wareegga gaagaaban, si ay u sii hesho meesha qaladka, si ay ula kulanto ujeeddada dayactirka degdegga ah; Intaa waxaa dheer, waxay tijaabin kartaa wax -ku -oolnimada qaybo ka mid ah, sida moodeelka awoodda iyo wixii la mid ah.
DP-22 Kameradda Sawirka Kuleylka ee Infrared
Astaamaha kaamerada kuleylka ee DP -22 iyo heerkulka oo kordhay -20 ° C ilaa 450 ° C iyo dareenka kuleylka ee 70mK ayaa tan ka dhigaysa mid ku habboon baaritaanno kala duwan.
Pip -ka xoogga badan (sawirka sawirka ku jira) ayaa u oggolaanaya in sawirka IR lagu dul dhejiyo sawirka muuqda si loogu daro faahfaahinta warbixintaada.
Muuqaal kale oo lagu daray kamaradani, iftiinka LED -ka ee xoogga badan kaas oo kuu oggolaanaya inaad sawirro muuqda ka qaaddo xitaa meelaha mugdiga ah.
Adigoo adeegsanaya Wi-Fi-ga caadiga ah waxaad hadda si aan kala go 'lahayn ugu wareejin kartaa sawirradaada kombiyuutarkaaga. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u aragto, tafatirto oo aad u abuurto warbixinno.
DP-21 Kaameeraha Sawirka Kuleylka ee Infrared
Xuquuqda lahaanshaha dukumintigan waxaa iska leh Shenzhen Dianyang Technology Co., Ltd. Maqaalku wuxuu tilmaamayaa macluumaadka lahaanshaha ee Shenzhen Dianyang Technology Co., Ltd., mana jiro unug ama shaqsi isticmaali kara ama shaacin kara dukumintiga iyo wixii sawirro ah, foomam, xogta iyo macluumaadka kale ee ku jira dukumintiga iyadoon oggolaansho qoraal ah laga haysan Shenzhen Dianyang Technology Co., Ltd.
nooca-256 kaamerada kuleylka infrared
Badeecadan waxaa lagu dabaqi karaa taleefannada gacanta/kiniiniyada, kombiyuutarada iyo aaladaha kale ee leh interface USB Type-C. Iyada oo la kaashanayo barnaamijka xirfadlaha ah ee APP ama softiweerka PC, muujinta muuqaalka infrared-waqtiga dhabta ah, muujinta tirakoobka heerkulka iyo shaqooyin kale ayaa la xaqiijin karaa.
DYT Clip-on Thermal Baaxadda N32-384
Qof kasta, meel kasta, waqti kasta, hal xabbad ayaa lagu toogtay, hal daqiiqo gudaheed.
Caawimaad looma baahna, qalab looma baahna, dhammaantood waxaa sameeyay toogte. Looma baahna luminta rasaasta, waqtiga, iyo baahida khibradda.
Qalliin hal-duub-qaliin ah oo lagu hago
Mid ka mid ah hawlgalkii menu-Scroll-buro ayaa si fudud u koontaroolay baaxadda kuleylka. Waxaa laga yaabaa inaad ku shaqayso unugga oo gashan gacmo gashi. Tusaha hawlgalka menu ayaa kaa caawin doona inaad doorato ikhtiyaarka saxda ah mar kasta, sidaa darteed, naso oo toog.
M256 moduleka sawirka kaamerada ee aan la qaboojin
Qaraar: 256 × 192
Meesha Pixel: 12μm
M384 moduleka sawirka kaamerada infrared
Sawirka kuleylka infrared wuxuu jebiyaa caqabadaha muuqaalka ah ee fiisikiska dabiiciga ah iyo waxyaabaha caadiga ah, wuxuuna kor u qaadaa muujinta waxyaabaha. Waa sayniska iyo teknolojiyadda casriga ah ee teknolojiyadda sare, oo kaalin togan oo muhiim ah ka qaata adeegsiga howlaha milateri, waxsoosaarka warshadaha iyo beeraha kale.
M640 module imaging kulaylka infrared
DR-23 kaameeraha sawirka kaamerada kuleylka
Hufnaanta ogaanshaha iyo darajada otomaatiga ee nidaamka baarista heerkulka jirka ee kuleylka kuleylka kuleylka ayaa aad ugu habboon baaritaanka heerkulka jirka ee degdegga ah garoomada diyaaradaha, isbitaallada, tareenada dhulka hoostiisa mara, saldhigyada, shirkadaha, dekadaha, suuqyada dukaamaysiga iyo dhacdooyin kale oo leh socod ballaaran. Waqtigan xaadirka ah, ma aha oo kaliya garoomada diyaaradaha, saldhigyada iyo dekadaha waxay isticmaalaan heerkulbeegyada infrared-otomaatigga ah ee caqliga leh oo dhammaystiran oo ah qalabka caadiga ah ee ka-hortagga cudurrada, laakiin iskuulada, suuqyada waaweyn, bulshooyinka iyo shirkadaha ayaa sidoo kale u adeegsada heerkulbeegga infrared-ka sidii shaybaadhka heerkulka iyo aaladaha ka-hortagga cudurrada faafa.
DP-32 Kaameeraha Sawirka Kuleylka ee Infrared
DP-32 Infrared Thermal Imager waa sawirka kuleylka aadka u sarreeya, kaas oo cabbiri kara kuleylka shayga bartilmaameedka onlaynka ah, soo saari kara fiidiyowga muuqaalka kaamerada oo hubin kara xaaladda kulaylka badan. La socoshada softiweer madal oo kala duwan, waxay ku habboonaan kartaa qaabab kala duwan oo loo adeegsado (sida cabbirka heerkulka aaladda awoodda, qaylo -dhaanta dabka, cabbirka heerkulka jirka bini'aadamka iyo baarista). Dukumentigan wuxuu soo bandhigayaa oo kaliya hababka adeegsiga cabbirka heerkulka jirka bani -aadamka.
SR-19 module imaging kulaylka infrared
Shenzhen Dianyang Ethernet SR taxanaha kaamerada kuleylka infrared waa sawir yar oo cabbir kuleylka ah oo shucaac ah. Badeecadu waxay korsataa qalabka wax soo dejiya, oo leh hawlgal deggan iyo waxqabad aad u fiican. Waxay ku qalabeysan tahay algorithm qiyaasta heerkulka gaarka ah iyo istcimaalka adeegsadaha si sahlan loo isticmaali karo. Cabbirkiisu waa yar yahay, culeyskiisuna wuu yar yahay oo hodan ku yahay interface. Waxay ku habboon tahay xakamaynta tayada, kormeerka isha kuleylka, aragtida amniga habeenkii, dayactirka qalabka iwm
#308, dhismaha B, hongshengyuan Park Warshadaha, waddada Bantian, Degmada Longgang, Magaalada Shenzhen